Qiimaha Kalluunka Suuqyada Muqdisho oo Hoos U Dhacay
Hoos u dhac ayaa xiligaan laga dareemayaa qiimaha la kala siisto Kalluunka Suuqayada Muqdisho, waxaana arrintaasi loo sababeynayaa xiliga bad-furanka oo dib u bilowday.
Abayoonis oo kamid ah dadka kalluunka ka ganacsada oo u waramay Goobjoog Business ayaa sheegay in xiliga bad-furanka oo la gaaray awgeed in waqti xaadirkan suuqyada Muqdisho ay soo galaan kalluun fara badan sidaa darteedna uu hoos u dhacay qiimaha kalluunka la iibiyo.
“Bad-xiranka saameyn weyn ayuu nagu yeeshay, malaay (kalluun) xumo ayaa nagu dhacday. Malaayga aad ayuu u yaraa. Alle ayaa mahad iska leh, hadda malaay badan ayaa suuqa soo galaya” ayuu yiri Abayoonis.
Maadaama kalluun badan uu suuqyada Muqdisho soo galo waqti xaadirkan marka loo fiiriyo bil ama laba bilood ka hor arrintaasi waxa ay keentay in qiimaha la iibiyo kalluunka ay saameyn ku yeelato oo uu hoos u dhaco.
“Hadda kiilada malayga Yuumbiga loo yaqaan $5 ayaa la iibiyaa halka markii hore la gadi jiray $9 ama $10, hadda iyo wixii kasii dambeeyana waxaan rajeyneynaa in kalluunka uu hoos usii dhaco shacabkana ay si fiican u iibsadaan” ayuu markale Goobjoog Business u sheegay Abayoonis.
Ugu dambeyntii, Cabdullaahi Ooyaaye oo isagana kamid ah dhallinyarada ka shaqeysa Kawaanka Malayga ee Suuqa Xamar Weyne ayaa tilmaamay in helitaanka kalluunka marka la gaaro xiliga xagaayga ay fududahay, lana joogo waqtigii laga faaideysan lahaa.